Tanzania oo loogu baaqay inay joojiso handadaada hay'adaha aan dowliga ahayn - BBC News Somali
Tanzania oo loogu baaqay inay joojiso handadaada hay'adaha aan dowliga ahayn
Image caption Gabadh shan iyo toban sano jir ah oo xaamila
Koox ka kooban sideed iyo toban ururada caalamiga ah ee u dooda xuquuqul insaanka ayaa u sheegay dowladda Tanzania in ay joojiso handadaada ay ku heyso ururada bulshada rayidka, kuwaasi oo difaaca xuquuqda hooyooyinka da'da yare ee ku laabta goobaha waxbarashada.
Toddobaadkii la soo dhaafay, dowladda Tanzania ayaa ugu hanjabtay ururkii u ololeeya in gabdhaha d'ada yar loo ogolaado in ay ku laabtaan waxbarashadooda ka dib marka ay kasoo laabtaan dhalmada.
Dhaleeceyntii ugu dambeysay ee ololaha madaxweyne John Magufuli ee ka dhanka ah gabdhaha yaryar in ay ku laabtaan waxbarashadooda, ayaa kooxaha xuquuqul insaanku waxa ay ugu baaqeen dowladda in ururadan loo madaxbanaaneyo howlahooda in ay u qabsadaan lagana joojiyo cagajugleynta.
Warbixintan ay sida wadajirka ah u soo saareen hay'adahan ka shaqeeyo xuquuql insaanka iyo Amnnesty international, ayaa lagu taageeray shan iyo labaatan urur oo maxali ah, kuwaasi oo si wadajir ah u garab istaagay in gabahdah da'da yar ay dib ugu laabtaan iskuuladooda.
Ururadan ayaan waxa ay dowladda madaxweyne Magufuli us oo bandhigay in ay diirada saarto waxbaridda muwaadiniinta iyada oo aan la kala soocin.
Bishii hore, Mr Magufuli ayaa caddeeyay in inta uu madaxweynaha yahay aan gabdhaha xaamilka loo ogolaan doonin in ay ku laabtaan iskuulada.
Hadalka madaxweyne Magufuli ayaa xoojinaya sharciga waxbarashada Tanzania, kaasi oo ka mamnuucaya in hooyooyinka da'da yar ay ku laabtaan waxbarashadooda.